21 South News | The FNG
Author Archives: 21 South News
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကို တောင်းပန် ဖို့ဝန်ကြီးချုပ် ဖြိုးမင်းသိန်း ငါးရက် အချိန် ပေး ဟု သိရ
July 15, 2017 by 21 South News Leaveacomment
မြန်မာ စစ်တပ် က အရာရှိ ကြီး အချို့ နဲ့NLD အစိုးရ အဖွဲ့မနေ့က တွေ့ပြီး နောက် မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြိုးမင်းသိန်း မဆိုင်းမတွ လုပ်ရမယ့် အချက် သုံး […]
မြင်းလှည်းတံ ထုတ် ချင်း ပေါက် ပြီး သေဆုံး
July 14, 2017 by 21 South News Leaveacomment
နတ်မောက် မြို့က ဆိုင်ကယ် နဲ့မြင်း လည်း တိုက် မှု မှာ မြင်းလှည်း ဆွဲတံ သည် ဆိုင်ကယ် စီးသူ ၏ ရင်ဝ ကို လှံတံ ကဲ့ သို့ထုတ် ချင်း ပေါက် ၀င်ရောက် ကာ ဆယ်မိနစ် […]
July 11, 2017 by 21 South News Leaveacomment
The United States on Monday called on Myanmar to allowaUnited Nations fact-finding mission to investigate widespread allegations of killings, rape and torture by security forces against Rohingya Muslims […]
July 8, 2017 by 21 South News Leaveacomment
The clap is clapping back. A new strain of gonorrhea is infecting patients all over the world — and the World Health Organization is sendingawarning that this mutant […]
By Donna Airoldi BANGKOK (Reuters) – The head of the U.N. refugee agency urged Myanmar on Friday to grant citizenship to the Rohingya,astateless Muslim minority in the Asian […]
ရိုးမ ဘဏ်သူဌေး က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စီးပွားရေး တိုးတက် အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်
July 7, 2017 by 21 South News Leaveacomment
တိုင်းပြည် ရဲ့စီးပွားရေး နှေးကွေးမှု နဲ့ဈေးကွက် မှာ ထုတ်လုပ် တင်ပို့မှု တွေ ကျ ဆင်း လာ တာ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့NLD အစိုးရ ရဲ့စီးပွား ရေး ကို အလေးထား […]
ဘဏ် နှင့် ငွေကြေး, ECONOMIC, News
July 3, 2017 by 21 South News Leaveacomment
YANGON – The European Union on Monday urged Myanmar to protect journalists from “intimidation, arrest or prosecution” after several cases of reporters running into trouble with the law, including three […]
စိန်ခြူး ကြာ ညောင် လ ရောင် မလင်း နိုင် တော့ ပြီ (အပိုင်း-၁)
July 1, 2017 by 21 South News Leaveacomment
ဆော်ဒီအားရေးဗီးယား နိုင်ငံသား တစ်ယောက် နှင့် ချစ်ကြိုး သွယ် ဖြစ် လမ့်မည် ဟု ရတီ ဘယ်တုန်း က မှ စိတ်မကူး မိခဲ့ ၊ ဆယ်တန်း နဲ့တက္ကသိုလ် ကျောင်း သူ ဘ၀ တွေ မှာ ချစ်သူ ရှိ ခဲ့ ဖူးသော် […]
လူငယ်ရေးရာ, သတင်း ဆောင်းပါး, Dining
June 30, 2017 by 21 South News Leaveacomment
ငြိမ်းချမ်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက် သမ္မတ ဘယ်တော့ မှ ဖြစ်မလာ နိုင်ပါ ဘူး ဆိုသည့် အတွေး မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတိုင် ခင် က တတိယ တန်း အဆင့် နိုင်ငံ […]
News, OP / ED
သမ္မတ သက်တမ်း တစ်နှစ် ပြည့် ပွဲ ကို အကြမ်းဖက် သမား တွေ ကို မောင်းထုတ် နိုင်ခဲ့ တဲ့ မာရာဝီ မြို မှာ ကျင်းပမယ်
June 29, 2017 by 21 South News Leaveacomment
ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ မှာ ကျ ရောက်မယ့်သမ္မတ သက်တမ်း တစ်နှစ် ပြည့် ပွဲ ကို မင်ဒါနာအို ကျွန်း က မာရာဝီ မြို့မှာ ကျင်း ပ မယ် လို့ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ဒူတာတေး က ပြော လိုက်ပါတယ်။
June 28, 2017 by 21 South News Leaveacomment
ကျွန်မြူနစ် သမ္မတ နီကိုလစ် မာဒူရို ကို ဖြုတ် ချ ချင် တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦး က မြို့တော် ကာရာကတ်(စ) က ဗဟိုတရား ရုံး ပေါ် ကို ဟယ်လီ ကော်ပတာ ပျံ ၀ဲ ပြီး လက်ပစ်ဗုံး နှစ် လုံး […]
The Myanmar Military Has Detained Three Journalists for ‘Unlawful Association
Myanmar’s military has detained seven people, including three journalists, in the country’s war-torn northern Shan State, raising fears ofafurther crackdown against the country’s already restricted press.
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာ ရေး ၀န်ကြီး နဲ့Wonder Woman ဇာတ်ကား ထုတ် လုပ်သူ စတိဗ် မနုချင် ရဲ လက်ထပ် ကို ထရမ့် တက်ရောက် ကောင်းချီး ပေး
June 25, 2017 by 21 South News Leaveacomment
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာ ရေး ၀န်ကြီး စတိဗ် မနုချင် ရဲ့တတိယ အကြိမ်မြောက် မင်္ဂလာ ဆောင် ကို ဒီနေ့ဝါရှင် တန် က Andrew W. Mellon ခန်းမ မှာ ကျင်း ပခဲ့ ရာ မ သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် […]
ဖက်ရှင်, ရုပ်ရှင်, Life Style, News
ပါကစ္စတန် မှာ ဆီတင် ကား မီးလောင် လို့လူ ၁၂၀ ကျော် မီးလောင် သေဆုံး ပြီး နောက်ထပ် ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန် ရ
ပါကစ္စတန် နိ်ုင်ငံ ပန်ဂျပ် ပြည်နယ် ယိုဖိတ် နေတဲ့ ဆီတင် ကား က မတော် တစ်စ ဖြစ် ပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ကာ လူ ၁၃၀ ကျော် အရှင်လတ်လတ် မီး
ကြက်ဥအတု ရေရှည်စားသုံးက မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းစေနိုင်
မြန်မာ ၀ီကီလိခ် စတင်ပြီ
Aung La N Sang def. Vitaly Bigdash via unanimous decision – to win middleweight title